တရုတ်နိုင်ငံ တွင်3D ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ကာဆောက်လုပ်ထားသည့်လူနေအိမ် - Xinhua News Agency
ကျန်းကျားခို၊ နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ ဟဲပေပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိကျေးလက်ဒေသရှိ နေအိမ်တစ်လုံးသည် မကြာသေးမီက လူအများကြားရေပန်းစားခဲ့သည်။
ထိုသို့နာမည်ကြီးသည့်အကြောင်းရင်းများထဲတွင် အိမ်တစ်လုံးလုံးကို ရိုးရိုးအုတ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲ ကြီးမားသည့် 3D ပုံထုတ်စက်ဖြင့် စကင်ဖတ်ပြီး ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်သည့်နည်းပညာဖြင့်ဆောက်လုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၂ ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကို ပူးတွဲကျင်းပမည့် ကျန်းကျားခို မြို့ရှိ ဝူကျားကျွမ်းကျေးရွာနေ ကျောက်ရွှီကျွမ်း ဟု အမည်ရသူ၏ နေအိမ်သည် အကျယ်အဝန်းစတုရန်းမီတာပေါင်း ၁၀၆ မီတာရှိပြီး အိပ်ခန်း၃ ခန်း၊မီးဖိုဆောင်တစ်ခုနှင့် သန့်စင်ခန်းတစ်ခန်းတို့ပါဝင်ပြီး မျက်နှာကျက်များနှင့် ကွန်ကရစ် နံရံများ ကို အမိုးခုံး ပုံစံများဖြင့် အလှဆင်ဆောက်လုပ်ထားသည်။
Tsinghua တက္ကသိုလ် လက်အောက်ရှိ ဗိသုကာပညာကျောင်း ၏ ပါမောက္ခ ရွှီဝေကောင်း က ဝူကျားကျွမ်းတွင် ယခုကဲ့သို့ 3D ပုံထုတ် ကျေးလက်နေအိမ်တစ်လုံးဆောက်လုပ်မည့် အကြံရခဲ့သော်လည်း ရွာသူရွာသားများ၏ စိုးရိမ်မကင်းသံများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ သံသယကြားမှပင် ကျောက်သည် ရွှီနှင့်အဖွဲ့အား 3D ပုံနှိပ်နည်းပညာဖြင့် အိမ်ဟောင်းကို ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း 3D ပုံနှိပ်နည်းပညာသုံး စက်ရုပ်လက်တံဖြင့်အောက်ခြေအဆင့်မှသည် နံရံများအထိ ကွန်ကရစ် တစ်လွှာချင်းစီ ခင်းကာပုံဖော်ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
အိမ်၏အမိုးကို သီးခြားပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ကရိန်းကိုအသုံးပြုကာ နံရံမှတစ်ဆင့်အမိုးတပ်ဆင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါအိမ်တည်ဆောက်မှု ကို အချိန် နှစ်ပတ်အတွင်းအပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
အိမ်ဆောက်လုပ်ပြီးချိန်တွင် အခြားသူများ၏ စိုးရိမ်မှုများကိုဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့သည်။
“အိမ်ကို ကိရိယာအစုံနဲ့ လူနှစ်ယောက်ထဲနဲ့ဆောက်တာပဲ၊ ခလုပ်ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ အိမ်တလုံးဆောက်ပြီးသွားတယ်၊ သိပ်ပြီး ထူးဆန်းတာပဲဗျာ” ဟု အမည်မဖော်လိုသူကျေးရွာသားတစ်ဦးကဆိုသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များက တရုတ်နိုင်ငံ၏3D ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ခြင်းဈေးကွက်မှာ လျှင်မြန်စွာတိုးတက်လာခဲ့ပြီး အဆိုပါနည်းပညာသည် အာကာသလေကြောင်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ မော်တော်ယာဉ်၊ ရေကြောင်းနယ်ပယ်အပါအဝင် နယ်ပယ်များစွာတွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုလျက်ရှိပြီဖြစ်သည်။
ကျွမ်းကျင်သူများက 3D ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရေး ကို နောက်တစ်ဆင့်တိုးမြှင့်ရန် ကြိုးပမ်းလျှက်ရှိရာ ကျေးလက်ဒေသများတွင် 3D ပုံနှိပ်ထုတ်လုပ်ရေးအိမ်များကိုဆောက်လုပ်ပြီး ကျေးလက်လူနေမှုဝန်းကျင်ကို အဆင့်မြှင့်ရန်အားထုတ်နေကြသည်။
“ဒီနည်းပညာက လူစွမ်းအား နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုချွေတာနိုင်ပြီး အရည်အသွေးနှင့် ထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ကောင်းမွန်စေပါတယ်” ဟု ရွှီက ဆိုသည်။ ထို့အပြင် အဆိုပါနည်းပညာဖြင့် သမားရိုးကျ အိမ်များ၏ ပုံစံ နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကို စိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းအခုံးအလှ မျက်နှာပြင်များဖြင့် ဖန်တီးနိုင်ကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။
ကျေးလက်အိမ်အား 3D ပုံနှိပ်နည်းပညာဖြင့် ပုံစံမထုတ်ခင် ရွှီနှင့် အဖွဲ့သည့် 3D ပုံနှိပ်နည်းပညာကို နေအိမ်နှင့်ပြင်ပနေရာများရှိအခြား ပစ္စည်းများကိုစမ်းသပ်ထုတ်လုပ်မှုပြုလုပ်ခဲ့သည့်အထဲတွင် ရှန်ဟိုင်းမြို့ရှိ အရှည် ၂၆.၃ မီတာရှိသော လူသွားကုန်းတံတား တစ်စင်းအပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍအားအဆင့်မြှင့်တင်ရန် နှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် နည်းပညာများကိုဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအား စဉ်ဆက်မပြတ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်လျက်ရှိသည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဗဟိုဌာန၁၃ ခုမှထုတ်ပြန်ခဲ့သည့်ညွှန်ကြားချက်တစ်စောင် ၌ အသိဉာဏ်နည်းပညာများဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ၏ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင်အဆင့်မြှင့်တင်ရန်၊ စက်မှုကဏ္ဍအဆင့်မြင့်မားစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် ရေတိုရေရှည် ရည်မှန်းချက်များကိုချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန် စသဖြင့် ပါရှိသည်။
“လက်ရှိ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အိမ်အလုံးရေများစွာနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများစွာကို ဆောက်လုပ်ဖို့ကျန်ပါသေးတယ်၊အသိဉာဏ်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ လုပ်သားရှားပါးမှုပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အပြင် လက်ရှိလုပ်သားတွေရဲ့ လေးလံတဲ့တာဝန်တွေကိုပါ လျော့ပါးစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရွှီကဆိုသည်။ (Xinhua)
GLOBALink | 3D-printed house takes shape in rural region of Hebei, Chinac
A rural house in north China’s Hebei Province has been catapulted into fame recently.
For one thing, it was not built brick by brick but constructed scan by scan with giant 3D printers.
“How canabig house be printed?”
Regardless of skepticism from her fellow villagers, Zhao asked Xu and his team to rebuild her old house with 3D printing technology.
At the construction site, 3D-printing robotic arms built up concrete materials layer by layer to form the foundation and walls.
After the roof was printed separately, it was put on the wall byacrane.
The kick-starter brought success and brushed away concerns.
“There were only two people on each device. They pressed the button, thenahouse was built. It’s amazing,” saidavillager without giving his name.
“At present, there are stillalarge number of houses and infrastructure to be built in China.
Intelligent technologies can solve the labor shortage problem faced by the construction industry, liberating workers from their heavy labor,” Xu said.